यी आशाजनक लगानीहरूको लागि हेर्नुहोस् - Shiv's Era
यी आशाजनक लगानीहरूको लागि हेर्नुहोस्
उच्च सम्भावित प्रतिफलको लागि पेनी स्टकमा लगानी गर्नुहोस्
तपाईंको वालेटमा नाफा बढाउन शीर्ष5पेनी स्टकहरू पाउनुहोस्
अहिले खरिद गर्नको लागि उत्तम पेनी स्टकहरू बारे जान्नुहोस्
Snipp Interactive को प्रभावशाली 136.8% वृद्धि दरबाट लाभ उठाउनुहोस्
पेनी स्टकहरू खुद्रा लगानीकर्ताहरूको 68% को लागि ठूलो लगानी हो
पेनी स्टकहरू पत्ता लगाउने तरिकाहरू
पेनी स्टकहरू उच्च प्रतिशत रिटर्नको सम्भावनाहरूसँग सस्तो मूल्यको स्टकहरू हुन्। यी कम बजार पूँजीकरण भएका साना कम्पनीहरूको स्टकहरू हुन्। तिनीहरूलाई खरिद गर्ने स्थितिमा तपाईंले आफूलाई कसरी राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नुहोस्।
यी5पेनी स्टकहरूले अहिले बाधाहरूलाई अस्वीकार गर्छन्
लकी ब्लक (LBLOCK), Snipp Interactive (SPN), Taseko Mines Limited (TGB), Exela Technologies (XELA) र Transocean Limited (RIG) अहिले किन्ने उत्कृष्ट पेनी स्टक हुन्।
LBLOCK टोकन: लकी ब्लकको लागि शासन टोकन
LBLOCK टोकन लकी ब्लक, एक गेमिङ प्लेटफर्मको लागि शासन टोकन हो। लकी ब्लकले अनलाइन गेमहरू पूर्ण रूपमा खेल्ने तरिका परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ। यो प्लेटफर्म विश्वव्यापी रूपमा सबैका लागि खुला छ, यसले ठूलो बजार प्रदान गर्दछ। यसले पारदर्शिता र निष्पक्षता सुधार गर्न ब्लकचेन पनि प्रयोग गर्दछ।
स्निप इन्टरएक्टिभमा कसरी लगानी गर्ने
Snipp अन्तरक्रियात्मक एक क्यानाडा प्रवर्द्धन र वफादारी प्रविधि कम्पनी हो। यसले धेरै देशहरूमा कम्पनीहरूको लागि मार्केटिङ, वफादारी, र छूट समाधानहरू प्रदान गर्दछ। कम्पनीको स्टक हाल $0.17 मा ट्रेड गर्दछ, तर पछिल्लो छ महिनामा यसको प्रदर्शन प्रभावशाली रहेको छ।
तामा विघटनकर्ता: Taseko माइन्स
Taseko Mines तामा क्षेत्रमा एक अन्वेषक हो। कम्पनीले संयुक्त राज्य र क्यानडामा सञ्चालन गर्दछ, केहि सबैभन्दा स्थिर तामा निकासी क्षेत्रहरू। राजस्व $ 132.6 मिलियन हिट भयो, जबकि समायोजित EBITDA $ 76.3 मिलियनमा बढ्यो।
Exela को आम्दानी, तेस्रो त्रैमासिक सेवा र युरोप मा मास्टरकार्ड संग साझेदारी गुमाउँछ
Exela Technologies, Texas मा आधारित, एक व्यापार प्रक्रिया स्वचालन कम्पनी हो। गत महिना, Exela ले युरोपमा मास्टरकार्डसँग आफ्नो साझेदारी विस्तार गर्‍यो, नर्वेमा 11 मिलियन भुक्तानीहरूको स्वचालनलाई समर्थन गर्दै। कम्पनीले 2021 को तेस्रो त्रैमासिकको लागि आफ्नो राजस्व अपेक्षाहरू चुक्यो।
किन Transocean लिमिटेड स्टक यो महिना 14% माथि छ
Transocean Limited राजस्वमा आधारित विश्वको सबैभन्दा ठूलो अपतटीय ड्रिलिंग ठेकेदार हो। यसको स्टक हाल फेब्रुअरीमा मात्र 14.3% ले बढेको छ। कम्पनीले यसै महिना मात्रै पाँचवटा नयाँ रिग निर्माणको ठेक्का घोषणा गरेको छ ।
स्टकहरू खरीद गर्दै – किन्न र बेच्ने उत्तम तरिकाहरू
अब तपाईलाई सबैभन्दा आशाजनक स्टकहरू थाहा छ, तिनीहरूलाई खरिद गर्ने उत्तम तरिकाहरू फेला पार्न महत्त्वपूर्ण छ। तल यी सेयरहरूमा आफ्नो हात प्राप्त गर्ने तरिकाहरू छन्।
प्यानकेक स्वैप: LBLOCK र छुट कोड किन्नको लागि तपाईलाई सबै जान्नु आवश्यक छ
तपाईं सजिलैसँग यी चरणहरू पछ्याएर PancakeSwap मा LBLOCK किन्न सक्नुहुन्छ।
कृपया PancakeSwap मा सामेल हुनुहोस् र उत्कृष्ट अनुभवको आनन्द लिनुहोस्
PancakeSwap Pancake Swap को आधिकारिक Pancake Swap घटना हो। प्यानकेक स्वैप पहिलो पटक नि:शुल्क प्यानकेक स्वैप घटना हो।
यो एपले तपाइँलाई तपाइँका साथीहरूसँग क्रिप्टो एक्सचेन्ज गर्न दिनेछ
प्यानकेकस्व्यापले हाल मेटामास्क, बीएससी वालेट, ट्रस्ट वालेट, वालेट जडान, आदिलाई समर्थन गर्दछ। “कनेक्ट वालेट” मा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले प्यानकेकस्वैपसँग जोड्न चाहनुभएको क्रिप्टो वालेट छान्नुहोस्।
अर्को महान ICO खोज्दै हुनुहुन्छ? PancakeSwap भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस्
PancakeSwap Binance स्मार्ट चेन मा आधारित छ। यसको मतलब तपाईलाई टोकनहरू खरिद गर्न Binance Coin (BNB) चाहिन्छ। तपाईं eToro बाट BNB किन्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ छ कसरी आफ्नो लागि उत्तम पेनी स्टकहरू फेला पार्ने
eToro मार्फत अहिले खरीद गर्नको लागि कुनै पनि उत्कृष्ट पेनी स्टकमा हात राख्ने तरिका यहाँ छ।
अहिले सम्मिलित हुनुहोस् र विश्व च्याम्पियन व्यापारी बन्नुहोस्
eToro गृहपृष्ठमा जानुहोस् र “अहिले सम्मिलित हुनुहोस्” मा क्लिक गर्नुहोस्। अहिले सामेल हुनुहोस। विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध eToros को श्रेणीमा सामेल हुन साइन अप गर्नुहोस्।
मैले मेरो पहिचान कसरी प्रमाणित गर्ने?
eToro लाई सरकारले जारी गरेको आईडी कार्ड र निवासको प्रमाण प्रयोग गरेर तपाईंको पहिचान प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। तपाईंको प्रोफाइल पृष्ठमा “प्रमाणित” प्रोम्प्टमा क्लिक गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्।
द गो मा लगानी: eToro, जम्मा गर्ने नयाँ तरिका
eToro ले तपाईंलाई बैंक स्थानान्तरण, भुक्तानी प्रोसेसर, र कार्डहरू प्रयोग गरेर जम्मा गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईको प्रोफाइल पृष्ठमा “निक्षेप” बटन छ।
कसरी तुरुन्तै स्टक व्यापार गर्ने
खोज पट्टीमा इच्छित स्टक खोज्नुहोस् र “ओपन ट्रेड” मा क्लिक गर्नुहोस्। तपाई कति व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ प्रविष्ट गर्नुहोस्, र क्लिक गर्नुहोस्।
पैसा कमाउन र वित्तीय स्थिरता प्राप्त गर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय तरिकाहरूको बारेमा तपाईंले के जान्न आवश्यक छ
शेयर बजारमा व्यापार पैसा कमाउन र वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्ने शीर्ष माध्यम हो। अब किन्नको लागि उत्तम पेनी स्टकहरू खोज्ने लगानीकर्ताहरूको लागि धेरै विकल्पहरू छन्। यद्यपि, यदि तपाईंले यस गाइडमा उल्लेख गरिएका कुनै पनि कम्पनीहरूमा सेयरहरू खरिद गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, हामी eToro प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं।
This post is also available in: हिन्दी (Hindi) English Tamil Gujarati Punjabi Malayalam Marathi Nederlands (Dutch) Français (French) Deutsch (German) עברית (Hebrew) Italiano (Italian) 日本語 (Japanese) Melayu (Malay) Polski (Polish) Português (Portuguese, Brazil) Русский (Russian) বাংলাদেশ (Bengali) العربية (Arabic) Español (Spanish) اردو (Urdu) Kannada